News - Daraasad: Baahida sii kordheysa ee cunnooyinka halaagga ah waxay keeneysaa koritaanka suuqa IQF
Daraasad: Baahida sii kordheysa ee cunnooyinka halaabay waxay keeneysaa koritaanka suuqa IQF
FARSAMADA keydka keyword / miro la qaboojiyey / isbeddellada miraha la qaboojiyey / miraha la qaboojiyey iyo khudradda / khudradda la qaboojiyey / isbeddellada khudaarta la qaboojiyey / shakhsiyaadka dhaqso badan ee la qaboojiyey / Suuqyada
Kobaca suuqyada waxaa sidoo kale horseed u ah baahida macaamiisha ee sii kordheysa ee alaabada cunnooyinka hallaabi kara, cunnooyinka ku habboon iyo cunitaanka badan ee miraha iyo khudradda aan xilliyada ahayn.
Suuqa shaqsiyadeed ee deg degga ah (IQF) waxaa lagu qiimeeyay $ 14.77 bilyan sanadkii 2016, waxaana la saadaalinayaa inuu gaaro 20.82 bilyan sanadka 2022, CAGR oo ah 5.9% inta lagu jiro xilliga saadaasha, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday MarketsandMarkets, New York.
Kordhinta isticmaalka miraha la qalajiyey ee la qalajiyey iyo khudradda iyo adeegsiga IQF ee badeecooyinka kale ee cuntada ayaa ah laba arrimood oo muhiim u ah fursadaha kobaca ee ciyaartoy kala duwan oo suuq ka ah gobollada sida Waqooyiga Ameerika iyo Yurub.
Kobaca suuqyada waxaa sidoo kale horseed u ah baahida macaamiisha ee sii kordheysa ee alaabada cunnooyinka hallaabi kara, cunnooyinka ku habboon iyo cunitaanka badan ee miraha iyo khudradda aan xilliyada ahayn. Sababtoo ah baahida sii kordheysa ee alaabada noocaas ah, soo-saarayaashu waxay diiradda saareen sameynta dhirta IQF ee goobo kala duwan iyo ka faa'iideysiga fursadda marka ay jirto baahi badan oo loo qabo alaabooyinka xilliyada fasaxa.
Si kastaba ha noqotee, caqabadda ugu weyn ee soo wajahday soo-saareyaashu waa baahida sare ee raasamaalka ee marxaladda ugu horreysa ee rakibidda iyo sidoo kale xeerarka dowladda ee la xiriira qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee soo saarayaasha cuntada.
Qaybta cryogenic-ka ayaa la saadaaliyay inay ku kori doonto heer sare
Qaboojiyaha loo yaqaan 'Cryogenic keyzing' waxaa badanaa loo isticmaalaa alaabada IQF, sida baalasha digaaga shaqsiyeed, digir la qaboojiyay ama waxyaabo kale oo badan oo cunto la soo baakadeeyay halkaas oo ay muhiim u tahay in la ilaaliyo qaybaha qofka.
Qaboojiyayaasha Cryogenic waxay yareeyaan heerkulka iyada oo si toos ah loo adeegsado nitrogen dareere ah ama kaarboon laba ogsaydh oo ku dhex yaal xayndaab ay ku jiraan wax soo saarka cuntada. Waqtigan xaadirka ah, tikniyoolajiyadda cryogenic waxay bixisaa faa'iidooyin dhowr ah, laakiin waxay u baahan tahay tiro badan oo qaboojiyeyaal ah. Waxaa sidoo kale la doorbidaa halka boosku u xaddidan yahay ama qaab jaban oo ah in alaab cusub suuqa loo geeyo si dhakhso leh.
Kordhinta baahida loo qabo IQF miraha & khudaarta
Kordhinta ka warqabka macaamiisha ee ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee miraha iyo khudradda ayaa sii kicisay baahida loo qabo wax soo saarka cusub ee la jaray ee qabow ee suuqa adduunka. Tiknoolajiyada cusub waxay bixisaa habeyn dhakhso leh iyo saxnaanta heerkulka, iyo sidoo kale faa'iidooyinka nadaafadda.
Xaqiiqdii, suuqyada soo ifbaxaya sida Ruushka, Hindiya iyo waddamada Latin Amerika waxay leeyihiin awood ballaaran oo miraha iyo khudradda la qaboojiyey sababo la xiriira heerka korsashada oo hooseysa.
Kobaca qalabka qaboojinta cuntada waxaa keena baahida sii kordheysa ee alaabooyinka la qaboojiyey sida rootida, miraha, hilibka iyo cuntada badda.
Suuqyada soo ifbaxaya waa xuduudaha cusub ee koritaanka
Gobollada Aasiya Baasifiga, Shiinaha iyo Hindiya waxaa la saadaalinayaa inay yihiin suuqyada soo koraya ee ugu dhaqsaha badan. Gobolku wuxuu haystay qayb ka mid ah 21.1% suuqa caalamiga ah ee IQF ee loogu talagalay miraha cabitaanka khudaarta. Kordhinta baahida loo qabo suuqan waxaa loo aaneynayaa magaalooyin deg deg ah, kordhinta dadka dabaqadda dhexe ah iyo dakhliga macaamilka qofkiiba. Kordhinta dakhliga macaamilka ayaa horseeday kororka qarashka macaamiisha ee alaabada cuntada qabow. Baahida macmiilka ee cunnooyinka la qaboojiyey iyo kuwa la qaboojiyey ayaa sii kordheysa oo caan ku noqoneysa jiilka soo koraya ee dhaqaalaha soo koraya.